အစ္စလာမ့်ထီးရိပ်အောက်မှာ…စုစည်းညီညွတ်စွာ…ရပ်လိုက်ကြပါစို့… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« It is high time for the Myanmar Muslims to openly question and demand USDP, NLD and other Ethnic National Parties about the continuing HATE-SPEECHES and atrocities by 969 Ma Ba Tha Swarn Arr Shins
Freedom from hate : Maung Maung in Aljazeera video 101 »
ဒီကနေ့…ဒီအချိန်…ဒီအခါမှာ…ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ မိမိ နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်တွေ.တူညီစွာ လက်ခံ ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေအချင်းချင်း…
မိသားစုထဲမှာ အိမ်မှာ…ပတ်ဝန်းကျင်မှာ….ရပ်ရွာ ထဲမှာ….ဝတ်ပြုနေကျဗလီတွေထဲမှာ
သာ…ကိုယ်ပိုင် သည်းသန့် ဘာသာရေးဝတ်ပြု မှု တည်ဆောက်ကြဖို့…လိုနေပါပြီ…
(Religious Islam is personal).
အစ္စလာမ် နိုင်ငံ့အရေး…(Political Islam)
…ရှေ့တန်းမတင်ကြဘဲ..အကီဒဟ် ဓတူသူများ ဘာသာ ဓတူသူများ
အတူတကွ… ဘုံရည်မှန်းချက်တခုထားပြီး… လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားကြဖို့…လိုပါတယ်
Unity in Diversity ဆိုတာလို…ကျွန်တော်တို့ဟာ…သီးခြားစီဖြစ်နေကြပေမဲ့…စည်းလုံး ညီညွတ်စွာရှိနေရပါမယ်…အဲ့ဒီအတွက်…မြင့်မြတ်တဲ့..စိတ်သဘော
ထားကြီး မားစွာနဲ့…. ညီညွတ်ရေးကို…တည်ဆောက်ကြရပါမယ်….
အလုပ်လုပ်ကြရမယ်….All for One…One for All…ဆိုတဲ့…လမ်းစဉ်အတိုင်းပေါ့….
ကိုယ်လဲ…အစ္စလာမ်…အခြားသူများလည်း…အစ္စလာမ်တွေဖြစ်ကြတယ် ( အ ကယ် ၍
ခါးသည်းစွာဖြင့် အခြားသူများကိုအစ္စလာမ် ဟုလက်မခံနိုင်
လျင်ပင်) …ငါတို့တတွေမှာ…အတွေးအခေါ်တွေမတူကြဘူး…
By Maung Maung Skw and Ko Ko Gyi
NOTE: When million of people march or wrote, “Je suis Charlie” no one in the right mind would even imagine that they all changed their names into Charlie. But they just show solidarity with Charlie. And if anyone or any group or any non-Muslim came and combine forces with us for the POLITICAL STRUGGLES with ISLAM (Muslims…we could regard them as shouting the slogan, “Je suis Islam.” They may be not Muslims but fighting for our cause: Buddhists, Christians, Jews, Hindus, Atheist or from other groups different from us.
U Khin Mg Kyi After all, unity is strength ,isn’t i
Ko Ko Gyi I am not asking them to pray behind those dissimilar “Muslims.” I am not asking to pray at their Masjids, not asking them or their children with their children. IF don’t want to eat or drink together..OK. Just to do politics together.But some of my friends who are hardliners or with very strong beliefs in Islam, told me that they could not regard some as Muslims. They even told me that they could not work together under ISLAM BANNER. IF they join them as non-Muslims they could work together. They have no problem working with other non-Muslims. They could not understand that they are not joining us under “Religious Islam” but under the NOT RELIGIOUS POLITICAL BANNER, “POLITICAL ISLAM’. See some political parties in Europe with Christian name…BUT they are non-religious political groups
Myanmar Military Government’s thugs 969 Ma Ba Tha Swarn arr shins won’t ask whether you areaSunni, Shia, Kardani, Garana, Indian-Muslim, pure Bama or Ethnic Minority converted into Islam…they don’t care…they will just assault, loot or kill you, as long as you areaMusli
This entry was posted on April 10, 2015 at 1:41 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “အစ္စလာမ့်ထီးရိပ်အောက်မှာ…စုစည်းညီညွတ်စွာ…ရပ်လိုက်ကြပါစို့…”
April 11, 2015 at 8:07 am | Reply
Kyaw Win ကျွန်တော့အမြင်ပြောကြည့်ပါ့မယ် ….. မွတ်စ်လင်မ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရင် …..
(၁) …. ဘာသာရေးအစွဲ၊ ဘောင်ခတ်မှုတွေရဲ့အပြင်ကို ခဏထွက်ပြီး ” မွတ်စ်လင်မ် ” ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုပဲ ရှိရပါ့မယ်။
(၂) …. Blame Game ကို ဆက်မကစားပဲ ချက်ချင်းရပ်ရပါ့မယ်။
(၃) …. ရန်သူ့ရဲ့ရန်သူဟာ ငါ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ သဘောတရားကို အသိအမှတ်ပြုရပါ့မယ်။
(၄) …. နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုထက် Powerful Think Tank တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။
(၅) …. အဲဒီ Think Tank က တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံစဉ်းစားပြီး အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အပေးအယူလုပ်နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထား( သုိ့မဟုတ် ) တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ်တွေ ဝင်အရွေးခံနိုင်လောက်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရပါ့မယ်။
နောက်ထပ်လည်းစဉ်းစားထားတဲ့ options တွေရှိပါသေးတယ်။ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါ့မယ်။
(၁) …. ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တုိ့က ဘယ်ပါတီ(NLD or USDP)ကို မဲပေးမယ်ဆိုတာ လုံးဝမဆွေးနွေးသင့်ပါဘူး။ အဲဒီအစား ကျွန်တော်တုိ့ရဲ့မဲတွေကို တတ်နိုင်သလောက် consolidation ရအောင်လုပ်ရပါ့မယ်။
(၂) …. ဒီလိုလုပ်ဖုိ့အတွက် ရန်ကုန်၊မန္တလေးကို ဗဟိုပြုပြီး ပြည်နယ်/တိုင်းအလိုက်မှ အောက်ခြေအထိ ချိတ်ဆက်ထားရပါ့မယ်။ ဒီအလုပ်လုပ်ဖုိ့အတွက် ကျွန်တော်တုိ့မှာ အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်။
(၃) …. ကျွန်တော်တုိ့ရဲ့မဲတွေ consolidation ရပြီဆိုရင် တစ်ပြိုင်နက်မှာ စဉ်းစားထားတဲ့ options တွေထဲက မဲဆန္ဒနယ်မြေအလိုက် အသင့်တော်ဆုံး option တစ်ခုကို ရွေးပါ့မယ်။
April 11, 2015 at 8:09 am | Reply
Aung Tin NLD ကတော့သူမဲရရှိရေးအ
မခံဘဲ အယူအဆ ကွဲလွဲတာ
road map ဆွဲသင့်ပြီးလုပ်
April 11, 2015 at 8:11 am | Reply
Raihan Azami Please think about 1990 election. There were many places that nld fail. Neither ta sa nya. Why? Those failed candidates were Muslims and from dawood jamar’s party. Actual nld candidates stand without party and won. You can check may myo. Peter lin pin. So it is all the same on us, only the names are changed like military.. like nld..